साङ्लोलाई घरेलु उपायले यसरि सजिलै भगाउनुस् - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized साङ्लोलाई घरेलु उपायले यसरि सजिलै भगाउनुस्
तपाईको घर कोठामा पक्कै पनि साङ्लोले कहिँ न कहिँ कुनै न कुनै बेला दुख दिएको होला। अँध्यारा कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्लाहरू फुत्तफुत्त निस्केर तपाईंलाई हैरानै गर्छन् होला । साङ्लोले नसताएको घर कमै भेटिएला ।
साङ्ला मार्न वा साङ्लाबाट मुक्ति पाईने भनेर बजारमा पाइने स्प्रेले साङ्लालाई मार्छ तर त्यसमा भएको रसायनले स्वास्थ्यलाई हानि पनि पु–याउँछ । यहाँ हामी केही घरेलु उपाय बताउँछौं जसको प्रयोग गर्दा साङ्ला पनि भाग्छन् र स्वास्थ्य पनि खराब हुँदैन ।
Previous articleअनुहारमा अनावश्यक रौँ छ ? सुन्तलाको बोक्राले यसरी हटाउनुस् !
Next articleकस-कसको पोल्टोमा पर्यो नेफ्टा अवार्ड ? सुची सहित
घरभित्रै निसास्सिएर काठमाडौँमा दुई जनाको मृत्यु